Nzira yekutengesa Zvigadzirwa paShopify Kubudirira | ECommerce nhau
Maitiro ekutengesa zvigadzirwa paShopify zvinobudirira
ECommerce nhau | 06/07/2021 10:20 | CMS uye Technology
Nhasi kutenga pamhepo yave nzira inonyanya kushandiswa yekutenga. Kutengesa neiyi nzira kwakakwira uye kubvira patakapfuura nekuvharirwa nekuda kwedenda reCovid-19, kunyanya.
Kusakwanisa kubva pamba, kutya hutachiona uye kurambidzwa vakatikurudzira kuti tishandise kutengesa kwepamhepo.
Chikonzero chacho chiri nyore. Kutenga muchitoro chepamhepo kuri nyore, kuri nyore uye nekukurumidza. Uye zvakare, hazvina basa kuti inguvai yaunoda kutenga kana riinhi, nekuti e-commerce inowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo. Nekungodzvanya kamwe chete tine zvatinoda pasuo redu mumaawa asingasviki makumi mana nemasere.
Iwe une bhizinesi diki uye urikufunga kuvhura yako wega online chitoro? Ramba uchiverenga nekuti mune ino posvo tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive kuti ugone kutengesa zvigadzirwa zvako mukati shopify.
1 Chii chinonzi shopify?
2 Shopify inoshanda sei?
3 Zvakanakira Shopify
Chii chinonzi shopify?
Kuti uvandudze ndangariro yako, tichaenda kukuyeuchidza kuti shopify chii uye chii chinosanganisira. Shopify iri CMS ye e-commerce iyo inobvumidza iwe kugadzira yako pachako online chitoro kune chako kufarira pasina kudiwa kwehurongwa hwekuziva.
Icho chiri nyore kwazvo, chinoshanduka uye maitiro ekuvaka ezvitoro anonzwisisika uye anoshanda. Mumaminetsi mashoma iwe unenge uine yako yepamhepo chitoro pasina kutambisa nguva yakawanda. Shopify ndeimwe yeCMS iri nyore pamusika.
Uye zvakare, ndiyo yazvino mue-commerce mapuratifomu uye iri kubudirira kwazvo pakati pekutungamira kwebhizinesi, kubvira inotsigira anopfuura makambani miriyoni imwe munyika zana nemakumi manomwe nemashanu.
Iyi chikuva iri anoshandiswa nemakambani kubata mawebhusaiti avo e-commerce, kushambadzira, kutengesa uye kuita kwakabatana.
Kana iwe uchida kuvhura yako e-commerce kuburikidza shopify, unofanirwa kusarudza shopify chaiyo maererano nezvinodiwa. Iwe une 3 shopify marongero:
Basic Shopify: iri zano rakareruka rekugadzira zvigadzirwa zvisingagumi uye zvikamu zvine maakaundi maviri evashandi. Iyo inodhura yakatenderedza 26 euros pamwedzi.
Shopify chirongwa: iwe unogona kuve nemaakaunzi mashanu uye uine kugona kugadzira mishumo yekuita. Iyo inodhura yakatenderedza 5 euros pamwedzi.
Yepamberi Shopify: Zano iri rakanakira mabhizimusi makuru, mairi zvinokwanisika kuti vashandi gumi nevashanu vawane mukana wepanodzora. Iyo inodhura yakatenderedza 15 euros pamwedzi.
Iva neakaunti shopify inopa mikana yakawanda kuti isu tinotora mukana wekukuudza pazasi:
Izvo zvisikwa uye manejimendi zviri nyore kwazvo. Kana iwe uchida kutanga kutengesa zvishoma nezvishoma, ino ndiyo yakanaka chikuva. Iwe unogona kugadzira, kugadzirisa uye kugadzira yako yega blog kusimudzira yako chitoro.
Mu shopify iwe une mukana wekuti kuitisa kuverengerwe, saka haufanire kunetseka nezve kurodha kumhanya kweako e-commerce.
Imwe mukana wepuratifomu ndeyekuti uchave nebasa rakanaka revatengi kuburikidza nemaforamu, hurukuro kana email.
Une iyo mukana wekugona kuve nehuwandu hwevatengi vako (shopify yemari yepamusoro) kutungamira yako yekutengesa nzira.
Shopify ine anopfuura makumi manomwe epasi rese ekubhadhara mari iyo inobvumira vatengi vako kuve nezvivakwa zvakawanda panguva yekubhadhara.
Saka haufanire kunetseka nezve nyaya yemutero, shopify otomatiki anotarisira yako nyika nyika mitero.
Iwe unenge uchiziva nezvese anotengesa, kubvira shopify inogamuchira uye inogadzirisa maodha mumasekondi uye inoita kuti iwe uzive nekukasira kuburikidza nefoni notices kana maemail.
Sezvauri kuona zviri yakapusa uye inokurumidza kugadzira yako wega online chitoro ne shopify. Pane zvakawanda zvakanaka izvo ino papuratifomu inopa kuti utengese zvigadzirwa zvako online.
Kunyange zvakadaro shopify yasvika nguva pfupi yadarika munyika medu, atove nerwendo rukuru muUnited States uye munyika yeAnglo-Saxon. Pasina kupokana, ipuratifomu yauya kuzogara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Maitiro ekutengesa zvigadzirwa paShopify zvinobudirira
SEO pane peji